Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Paoma: Inona no ataonao, rehefa lasa ny eran-mahasoa indrindra orinasa?” dia nosoratan'i Rupert Neate in New York, fa ny Mpandinika ny Asabotsy 31 Janoary 2015 15.01 UTC
Rehefa Apple lasa ny orinasa mahasoa indrindra teo amin'ny tantara tamin'ny herinandro lasa, mpandalina Saika tsy misy ny fientanentanana.
"Mahatalanjona", "Miavaka", "Ny dragona" no sasany amin'ireo mpandalina 'isa fanehoan-kevitra mampiseho ny Silicon Valley mafy nataon'i $ 18bn (£ 12bn) tao anatin'ny telo volana - amin'ny alalan'ny fivarotana 34,000 iPhones adiny iray andro aman'alina tamin'ny Oktobra Desambra. Izany izao no $ 178bn vola ao amin'ny banky.
Fa araka izay rehetra korontana, ny fanontaniana dia nanomboka. Ho an'ny orinasa izay efa niverina avy any amoron'i ny niraharaha latsaky ny 20 taona maro lasa izay, Firy Taona ny vaovao tsara foana? Ireto ny enina miatrika fanontaniana lehibe manerana izao tontolo izao lehibe indrindra ny orinasa fahombiazana.
ara-bola, dia izao ny fara tampony?
Apple dia 90 andro hiala Tsy niraharaha, rehefa Steve Jobs rejoined izany tamin'ny 1997- araka izay tatỳ aoriana nanambara - Apple izao fa mazàna ny hamaivanina ny fahombiazana ara-bola isaky ny telo volana mialoha ny filazana soa mba gaga mpampiasa vola sy ny mpamakafaka.
Ny tombom-barotra tao an-tanàna ity teo amin'ny sehatra hafa, anefa. Varotra ao amin'ny telo volana sisa tsy ho faran'ny volana Desambra dia niakatra 30% ny $ 74.6bn. Ireo tombony ny $ 18bn dia ny 37%.
Izany no haingana indrindra fitomboana isaky ny telo volana hatramin'ny Martsa 2012, fa avy eo Apple dia ny antsasaky ny habeny dia izao. Araka ny lehiben'ny Apple mpiandraikitra ara-bola, Luca Maestri, nanao hoe:: "Fa ny orinasa ny habeny izay tsy kely feat."
Katy Huberty, ny fanadihadiana amin'ny Morgan Stanley, nilaza fa ny "ampahefatry ny firaketana an-tsoratra ho an'ny boky", ary nampitombo ny anjara Price ampinga lehibe avy $126 ny $133, milaza izy mino misy kokoa ny fitomboana ho avy. ny mizara, izay nitsambikina 5% nanaraka-ora varotra ny vokatra Apple manaraka, mihidy amin'ny $117 amin'ny zoma.
Ny fanamby lehibe izao, Hoy i Geoff Blaber, lefitra-filoha ny fikarohana ho an'ny CCS Insight, dia ny mahita ny fitomboana manaraka fahafahana. "Andrefana Eoropa sy Amerika Avaratra dia ho lasa tototry: mba hanana toerana ho an'ny fitomboana Apple tsy maintsy miantehitra amin'ny fitomboana mandray avy [Google ny] Android miasa rafitra mifototra fitaovana," hoy izy. "Ny lehibe, lehibe, mifantoka ao Shina sy ny kely indrindra hatraiza India. "
Mpandinika nadinadinina avy Thomson Reuters Apple manantena ny fidiram-bola ao amin'ny taona ho Septambra mitombo 22%, fa ny fitomboana hampihena ny 4% ao amin'ny taona manaraka.
Misy maro ny olona sisa izay maniry ny iPhone?
Apple nivarotra ny firaketana an-tsoratra amin'ny finday 74.5m amin'ny lafiny, 46% mihoatra noho ny tamin'ny vanim-potoana isan-taona ihany aloha. "Mitaky for iPhone efa mampiraikiraiky, hanorotoro ny fanantenana avo,"Lehiben'ny mpanatanteraka Tim Cook hoe:. "Ity boky dia sarotra takarina."
Ny finday isaina ny roa am-pahatelon'ny Apple ny vola miditra, ary dia sarobidy noho ny Microsoft sy Google isaky ny telo volana farany varotra mitambatra.
"Toa toy ny izao tontolo izao te ho iPhone,"Steven Milunovich, ny fanadihadiana amin'ny UBS, Nanoratra tao amin'ny fanamarihana ny mpampiasa vola, manondro fa efa nitaky mpanjifa finday, nefa vao mainka tsy afaka mamokatra Apple azy mafy ampy Vao haingana.
Na izany aza, Toni Sacconaghi, ny fanadihadiana amin'ny Bernstein Research, dia mampitandrina fa ny fitomboan'ny Apple dia mety loatra izay miankina amin'ny fito taona vokatra tsipika. "A Bet amin'ny Apple mitombo hatrany ny loka eo amin'ny iPhone,"Hoy i Sacconaghi. "Ny vaovao tsara dia, iPhones lehibe. Ny vaovao ratsy dia, amin'izao fotoana izao dia ny mitondra fiara ny 100% ny vola miditra fitomboan'ny ny orinasa. "
Ny Sinoa mpanjifa mividy iPhone vaovao roa 6s. Sary: Johannes Eisele / AFP / Getty Images
Nahoana no zava-dehibe ny Shina?
Very: iPhone varotra no mipoaka ao amin'ny firenena. Apple nahatratra an-toerana mpamokatra Xiaomi ho lasa lehibe indrindra ao Shina mpivarotra finday avo lenta eo amin'ny lafiny farany. Shinoa ny varotra, izay efa tsy manan-kery ho an'ny Apple mandra-namoaka ny farany efijery lehibe-telefaonina, niditra teo am $ 16.1bn, ny 70% ny tamin'ny taon-dasa - raha izany ihany koa tsy manana fifanarahana manome azy ny fidirana amin'ny China Mobile ny tombanana 760 tapitrisa mpanjifa.
Vola miditra ao Shina dia haingana nahatratra ny vola dia manangona ao amin'ny rehetra ny Eoropa, izay varotra dia $ 17.2bn, ny 20%.
"Teo aho tamin'io [any Sina] tsara araka ny fandefasana tamin'ny Oktobra, ary ny fientanam-po manodidina ny iPhone 6 ary 6 Bebe Kokoa [dia] tena mahatalanjona,"Hoy Cook nandritra ny antso amin'ny mpandalina. "Afaka milaza fa be izahay mpino ao Shina."
Apple mikasa ny avo roa heny ny isan'ny lehibe kokoa ny fivarotana any Shina ny 40 amin'ny tapaky ny 2016. "Tena tsy mampino tsena,"Hoy izy. "Ny olona tia Apple vokatra. Ary tiantsika ny hanao ny tsara indrindra mba hanompo ny tsena. "
Isan-taona ihany aloha, tamin'ny Oktobra 2013, Apple no No 6 finday avo lenta mpanao in Shina, tanatin 'Xiaomi, Huawei, Lenovo, Samsung sy Yulong, araka ny fikarohana mafy Canalys.
"Izao no vokany mahagaga, nomena fa ny eo ho eo fivarotana ny vidin'ny Apple dia efa ho avo roa heny handsets ireo ny akaiky indrindra mpifaninana,"Hoy i Canalys. "Raha Shinoa mpivarotra finday avo lenta dia haingana tany nahazo sehatra iraisam-pirenena, Apple efa niova ho azy ny vato fisaka amin'ny tsena an-tranony. "
Afaka tsy manam-bola ho an'ny Apple Watch mba tsy?
Efa dimy taona hatramin'ny farany Apple nanomboka ny tena vokatra vaovao - ny iPad - in 2010. Mba hiaina mifanaraka amin'ny anarany ho zava-baovao, ary isan-karazany vola azo hiala miantehitra amin'ny iPhone, Apple mila ny Apple Watch ho tsy nahay fahombiazana.
Cook dia nanambara fa ny mpiambina ho any amin'ny amidy tamin'ny Aprily, manome ny orinasa ny tosika amin'ny telovolana fahatelo, rehefa izany dia tsy handray soa avy amin'ny Krismasy na ny Taombaovao Shinoa, izay efa nanampy teo aloha faritra roa. "Izahay hanao fandrosoana lehibe eo amin'ny fampandrosoana izany,"Hoy izy.
Apple dia manoritsoritra ny vokatra vaovao - matetika antsoina hoe ny iWatch, na dia tsy mbola antsoina hoe fomba ofisialy - ho toy ny "fitaovana manokana indrindra hatramin'izay", ary izany no nihevitra fa ho afaka hanara-maso ny mitafy azy ny fahasalamana ary koa ny mifandray amin'ny iPhone mba hanomezana asa maro hafa. Hoy Cook fampiharana mpandraharaha efa nampiaiky volana azy "tsy mampino ny sasany zava-baovao".
Carolina Milanesi amin'ny Kantar Worldpanel ComTech hoy ny fiambenana dia hanampy Apple manitatra ny varotra an-be midadasika tsena. "Izy ireo Tena marani-tsaina amin'ny manosika azy io ho jewelery sy ny famolavolana fa tsy ny fomba teknolojia tsaina izany," Hoy izy. "Izy ireo mifantoka bebe kokoa amin'ny horaketintsika ny famolavolana sy ny lamaody izao tontolo izao noho ny teknolojia mpitoraka blaogy.
"Mino aho fa izany dia ho be kokoa ny tsy mahay mandinika hividiananao be noho ny momba ny iPad. Amin'ny iPad no naniry ny iPad: izany dia nitranga ho bebe kokoa ny lamaody fanambarana. "
Hoy izy hoe ny fandefasana fa handray soa avy amin'ny lamaody sy ny varotra fahaiza-manao ny Angela Ahrendts, ny teo aloha mpampiasa Burberry nanakarama Apple tamin'ny taon-dasa amin'ny $ 73m karama fonosana ho toy ny lohany amin'ny antsinjarany.
Apple poached ny tady ny lehibe anarana avy amin'ny lamaody sy ny famolavolana ny hiaraka ny fiambenana ekipa, anisan'izany Patrick Pruniaux, teo aloha lefitry-filohan'ny varotra amin'ny Tag Heuer sy teo aloha Laurent lehibeny Yves Saint Paul Deneve, izay izao Apple ny "filoha lefitry ny tetikasa manokana".
Tim Cook Namoaka ny Apple Watch tao California tamin'ny taon-dasa. Sary: Zuma / Rex
Efa Tim Cook nivoaka avy ao amin'ny aloky ny Steve Jobs?
Vitsy ny lehiben'ny mpitantana tahaka mifandray akaiky ny orinasa toy ny Jobs nomba an'i Apple, ary Cook Niatrika ady sarotra ny handresy ny mpampiasa vola izay natahotra izy nanana ny mpiara-manorina ny fahitana sy ny showmanship.
Mpikatroka mpampiasa vola David Einhorn sy Carl Icahn efa niezaka hanakantsakana ny fitantanana Cook, fa efa nijoro ny tany. Izy ihany koa nampiseho ny steely lafiny amin'ny axing Scott Forstall, ny teo aloha ny iOS lohan'ny rafitra miasa finday, ny tsy fandefasana ny Apple Maps fampiharana, ary koa ny fanoloana ny lohan'ny orinasa toeram-pivarotana, John Browett - ny teo aloha mpampiasa Dixons - rehefa latsaka ny herintaona ao amin'ny asa.
Asa sy ny Cook dia "samy hafa toetra toy izany", hoy i Milanesi, izay nanaraka an'i Apple ho folo taona mahery. "Ny fandraisana eo ambany Cook efa tena tsara: dia tena miavaka ao amin'ny asa sy ny fitantanana ny vokatra rojo. "
Milanesi hoy i Cook ihany koa nanao be mba manao Apple mahatsiaro ho toy ny marika mora hatonina kokoa. "Ny Jobs dia aspirational fa somary untouchable sy lavitra," Hoy izy. "Toa misokatra kokoa sy mora eo ambany Tim, ary izay zava-dehibe raha te-hanitatra ny vokatra isan-karazany ho amin'ny malalaka fizarana ny mpanjifa.
"Ny fitsapana lehibe no ho ny Apple Watch, araka izany ny vokatra voalohany ho nalefa eo ambany fitarihan'i. "
Ho Apple ny be vola antontam ho andraikitra?
Apple no manao be vola kokoa noho ny mety mandany, ny hany ka efa miorina ny $ 178bn vola antontam. Izany koa $ 23bn ho ny kitapom-bolany ao amin'ny farany, ary efa ho lafiny rehetra no banked any ampitan-dranomasina. Naka izany indray amin'ny Etazonia mba hiverina izany ny mpanana petrabola dia hiharan'ny hetra lehibe volavolan-dalàna.
Mba hanefa mpampiasa vola Apple dia mividy indray mizara, fa ny mindrana manohitra ny vola fa tsy mampiasa ny renivohitra. Tsy nividy indray $ 45bn ny mizara tamin'ny taon-dasa, fa tsy nanao be ny Dent eo amin'ny vola. Manana $ 35bn ny trosa.
Blaber hoy i Apple mila hihazona lehibe ambiny mba omeo "ny hozatra sy ny mahavita ny vola ao amin'ny sokajy vaovao". Fa ny farany sy lehibe indrindra fahazoana - Dr Dre ny écouteur sy ny raharaham-barotra mivantana Mamono Electronics - vola izany $ 3bn.
Ny haben'ny Apple Nihazonako ny vola no nahasarika ny sain'ireo mpanao politika. Cook dia nilaza Kongresy ny orinasa dia hitondra azy indray amin'ny farany onshore, fa raha tsy rehefa misy "mampivarahontsana simplification ny orinasa hetra fehezan-dalàna", anisan'izany ny "antonony hetra amin'ny vola avy any ivelany izay mamela ny fivezivezena malalaky ny renivohitra niverina ho any amin'ny US".
← Previous Post Apple ny Watch Battery Angamba tsy haharitra The Day →